Geely ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီသည် Meizu ၏ ၇၉. ၀၉% ကိုဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေသည် - Pandaily
Geely ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီသည် Meizu ၏ ၇၉. ၀၉% ကိုဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေသည်
Jun 13, 2022, 20:52ညနေ 2022/06/13 23:01:26 Pandaily
စျေးကွက် ကြီးကြပ် ရေးအတွက် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာ ချက်အရGeely ၏ စမတ်ဖုန်း လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ Hubei Xingji Times Technology Co., Ltd.စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Meizu နှင့် အစုရှယ်ယာ ရှ င်များနှင့် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၇၉. ၀၉% ကိုဝယ်ယူ ရန်သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
တရုတ် ကား ကုမ္ပဏီ Geely သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စမတ်ဖုန်း နယ်ပယ် သို့ ၀ င်ရောက် ကြောင်း တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်း စီမံကိန်းကို ဟူ ဘေး ပြည်နယ် ဝူ ဟန် တွင် အခြေစိုက် သည်။ ကုမၸဏီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း မႈေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ စမတ္ဖုန္း ေတြကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ တာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ ေစ်းကြက္ကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားပါတယ္။ Xingji Times ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Geely ကို တည်ထောင်သူ Li Shufu သည် ၅၇. ၈၄ ၅၂% ပိုင်ဆိုင်သည်။
Meizu ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စမတ်ဖုန်း ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့သည်။ စမတ် ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ စမတ် အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ၊ ဖက်ရှင် စားသုံး သူများ၊ အီလက်ထရောနစ် နှင့်အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် လည်းပါ ၀ င်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ် မတိုင်မီက Meizu တည်ထောင်သူ Huang Xiuzhang နှင့် Taobao China တို့သည် Meizu ၏ ၄၉. ၀၈% နှင့် ၂၇. ၂၃% အသီးသီး ပိုင်ဆိုင်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ် အပြီးတွင် Meizu ရှိ Huang ၏ အစုရှယ်ယာ ၉. ၇၉% သို့ ကျဆင်းသွားပြီး Taobao China သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ နှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခဲ့သည်။ ဝယ်ယူ သူ StarCraft Age သည် Meizu ၏ ၇၉. ၀၉% ကိုပိုင်ဆိုင် ပြီး ၎င်းကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းချုပ် လိမ့်မည်။
Meizu က မီဒီယာ Tencent Technologies သို့ ပြောကြား ရာတွင် Li Shufu ၏ Starbase Times သည် မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက် တစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ ငွေပေးငွေယူ သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း အာဏာ ပို င်များ၏ ခွင့်ပြုချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ကိုလုပ်ဆောင် ရန်လိုအပ် ပြီး ငွေပေးငွေယူ အသေး စိတ်ကို ညှိနှိုင်း နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Geely ၏ စမတ်ဖုန်း လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု
Geely အျပင္ NIO နဲ႔ Tesla တို႔ကလည္း စမတ္ဖုန္း ေတြ ထုတ္ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ NIO တည္ေထာင္သူ William Lee ကလည္း မၾကာေသးခင္က မီဒီယာ ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ NIO အေနနဲ႔ မၾကာခင္ ကာလမွာ ကုမၸဏီရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ ကား ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ မယ့္ စမတ္ဖုန္း တစ္လံုး မိတ္ဆက္ သြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။